mairie-antananarivo – Masoivoho Britanika – Ben’ny Tanàna
administrateur 18 janoary 2018 Commentaires fermés
Nitsidika tamin’ny fomba fifanajana ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny Alakamisy 18 Janoary 2018 ny Masoivohon’ny Fanjakana Britanika ny Son Excellence Philip BOYLE. Fantatra fa 2 volana izay no nahatongavan’ity Ambasadaoro Britanika ity teto Madagasikara ka nandritra izany no efa nitsidihany ny tomponandraikitra eto amin’ny Firenena Malagasy ka anisan’ny ny Ben’ny Tananan’Antananarivo satria Antananarivo rahateo no misy ny Masoivoho Britanika.
Na ity Ambasadaoro ity na ny Ben’ny Tanànan’Iarivo Lalao Ravalomanana dia samy nijery ny fomba hampivelarana ny fiarahamiasa sy izay heverina fa laharam-pahamehana. Fantatra fa sehatra maro no efa hiarahan’ny Fanjakana Britanika miasa amin’ny Firenena Malagasy ka anisan’ny misongadina amin’izany ny tontolon’ny varotra, ny fampiasam-bola amin’ny sehatra maro sy ny Programam-piarahamiasa isantsokajiny, eo koa ny tontolon’ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana.
Nohamafisina fa ny Fanjakana Britanika dia manampy amin’ny alalan’ny Fikambanana Iraisam-pirenena toy ny Vondrona Eropeana, Firenena Mikambana. Ny fisiako eto Madagasikara hoy ny Son Excellence Philip BOYLE Ambasadaoron’ny Fanjakana Britanika e dia manokatra misimisy kokoa ny fiarahamiasa eo amin’i Firenena Malagasy sy ny fireneny ka anisan’izany sy tsy ataony ambanin-javatra ny Tananan’Antananarivo Renivohitra amin’ny maha renivohitr’i Madagasikara azy.